सेना–प्रहरी धेरै चकचक नगर्नुस,भ्रष्टलाई कारवाही गर्छौं, सके सहयोग गर्नुसः विप्लव – Bihani Post
सेना–प्रहरी धेरै चकचक नगर्नुस,भ्रष्टलाई कारवाही गर्छौं, सके सहयोग गर्नुसः विप्लव
Bihani Post April 17, 2019	Uncategorized 414 Views
काठमाडौं। प्रतिबन्धित पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आफ्नो पार्टीले चलाएको राजनीतिक आन्दोलनप्रति संयम रहन नेपाली सेना तथा प्रहरीलाई आग्रह गरका छन् । विप्लवले पुँजीवाद—दलाल पुँजीवाद रहेसम्म जनता पनि मुक्त नहुने र सुख र समृद्धी पनि नआउने भन्दै सेना र प्रहरीहरु पनि यो व्यवस्थाबाट पीडित भएको भन्दै आन्दोलनलाई राजनीतिकरुपमा लिन र सहयोग गर्न अपील गरेका हुन् ।
विप्लवले भोली बैसाख ५ गते आहरवान गरको नेपाल बन्दलाई सफल पार्न सबैलाई सहयोग गर्दै प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र आफ्ना नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेको विरोधमा सो पाटीले बैसाख ५ गते नेपाल बन्दको आयोजना गरेको छ ।
विप्लवले विज्ञप्तिमा भेका छन्, जनतामाथिको दमन र प्रतिबन्ध भन्ने कुरा दलाल वर्गका थैली भर्ने फट्याइँ मात्र हुन् । यस्ता नयाँ जोगीहरूको उचालाईमा लागेर सेना–प्रहरीहरूका जवान र अफिसरहरू पनि धेरै चकचक नगरौँ । तसर्थ आउनुहोस् जनसमुदाय मुक्ति, अधिकार र स्वाधीनताका लागि सारा एक हौँ र केपी वली सरकारको फासिवादी दमनको प्रतिरोध गरौँ ।’
विप्लवले विज्ञप्तिमा ‘अधकचल्टो क्रान्तिले केही व्यक्ति र नेताहरूलाई सत्ताभोगी लुटेरा वर्गमा पतन गरिदिन्छ । जनयुद्धलाई हामी यसबाट बचाउन चाहन्थ्यौँ । अपसोच ! प्रचण्डहरूको गद्दारीले गर्दा मुठीभर माओवादीहरू (धेरै त त्यहाँ पनि उत्पीडित नै छन) लाई दलाल पुँजीपति (अर्बपति, करोडपति) वर्गमा पतन गरायो ।
उनीहरूलाई उदाहरण बनाएर सारा क्रान्ति नै असम्भव भन्दै जनताको मुक्तिमार्गलाई बन्द गरिदिने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । यसबाट सबै सचेत बनौँ, भनिएको छ ।
विप्लवले अपिलमा केपी सरकारको चरित्रलाई पनि उदाङ्गो पारिएका छन । भनिएको छ, ‘केपी ओली सरकार आएपछि कति जनघाती–राष्ट्रघाती अपराध र काण्डहरू भए । खै सुन तस्करहरूको हिसाब ? खै ठूलो जहाज काण्डको ६ अर्ब रुपैयाँ ? खै चिनीकाण्डका अपराधीहरू ? खै एनसेलकाण्ड रच्ने कमिसनखोरहरू ?
खै बूढीगण्डकीका कमिसनखोरहरू ? खै निर्मलाका बलात्कारी र हत्याराहरू ? खै अरुण तीन र माथिल्लो कर्णाली बेचेर खानेहरू ? खै प्रहरी–प्रशासनलाई घूसखोरी, चाकरी–चाप्लुसीमा फसाएर इमानदारलाई कारबाही र ठगलाई पुरस्कृत गर्ने फटाहाहरू ? भाषणमा त केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भनेको होइन ? आज के हुँदैछ जनसमुदाय ? केपी बस्ने बालुवाटार समेत बेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउने विष्णु पौडेलहरूलाई के भयो ?
तारागाउँको सयौँ रोपनी जमिन लिलाम गरेर खानेहरूलाई के भयो ? भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने अख्तियारका भ्रष्टाचारीहरूलाई के भयो ? के यो केपीको पाखण्डी, निकृष्ट र अधमपन होइन ? यो त ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भनेको भएन ? म भ्रष्टाचरमा डुब्छु र अरूलाई पनि भ्रष्टाचारमै बगाउँछु भनेको भएन ? यी अपराधी त उल्टो हामीलाई गोली हान्ने आदेश दिँदै पो हिँडेका छन् त !
अनि यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र यो सत्ताको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्दा हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ? जनताले नै भन्नुस् प्रतिबन्ध हामीलाई कि देश डुबाउने, जनता कङ्गाल बनाउने, जनतामाथि दमन गर्ने र राजनीतिक अधिकार नै खोस्ने भ्रष्ट, तस्कर, कमिसनखोर, दलाल केपी सरकारमाथि लगाउने ?’
आफ्नो पार्टी देश र जनताका पक्षमा लड्दै आएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी श्रमिक जनता मजदुर किसानको अधिकारका लागि लड्ने पार्टी हो । सारा देशलाई माया गर्ने देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्व गर्न तयार पार्टी हो ।
हामीलाई वास्तवमै देशको स्वाधीनता, जनताको पूर्णमुक्ति र अधिकारबाहेक केही चाहिएको छैन । हामीले नेपाली क्रान्तिका अनेकौँ तीता–मीठा, सफल—असफल शिक्षाहरूसहित एकीकृत जनक्रान्तिलाई अगाडि बढाएका छौँ । हामीले २००७ साल, २०२८ साल र २०५२ सालका विद्रोह र जनयुद्धमा साथ दिने, भाग लिने जनताका बलिदान, आशा अपेक्षालाई बुझेर, कांग्रेस, केपी वली, प्रचण्डहरूसम्मका धोका, बेइमानीलाई पचाएर देशको शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ यो कदम उठाएका छौँ ।’
गार्डलाई फसाउन यी मोडलले आफ्नो लुगा आफै खोलिन्, धन्न सिसीटिभीमा सबै कैद भयो (भिडियो हेर्नुस)
FacebookPinterestTwitterLinkedinभारत : नशाको तालमा पुलिसकै अगाडि कपडा खोलेर हंगामा गर्ने मोडल मेघा शर्माको भिडियो सार्वजनिक …